Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.-The 84th China International Medical Equipment Fair （Mmiri） na Shanghai
Hangzhou Shanyou Medical Equipment ji obi eziokwu na-akpọ gị ka ị gaa na ụlọ ntu maka alo Ngosi oge: 2021.5.13-2021.5.16 Ngosi ọnọdụ: National ngosi na Convention Center (Shanghai) Hall 2.2-T27-T29 Gbasara anyị: "ỌR” "ika: Anyị na ngwaahịa tumadi gụnyere nkpuchi, akpịrị endotracheal ...
Masgba ihe nkpuchi bụ ụzọ dị mkpa iji gbochie ọrịa iku ume. Mgbe ị na-ahọrọ ihe nkpuchi, anyị kwesịrị ịghọta okwu ahụ bụ "ahụike". A na-eji ihe nkpuchi dị iche iche eme ihe na ebe dị iche iche. A na-atụ aro ihe mkpuchi ọgwụ a na-ekpofu ekpofu n'ebe na-enweghị ebe mmadụ jupụtara; The echebe mmetụta nke ọgwụ su ...
Mkpokọta ọgwụ na-abụkarị usoro atọ (nke a na-ekweghị), nke a na-eji akwa abụọ nke spunbonded non-kpara akwa ejiri maka ọgwụgwọ na ahụike, na-agbakwunye otu oyi akwa n'etiti etiti abụọ ahụ, nke emere. nke ngwọta sprayed na-abụghị kpara akwa na ihe karịrị 99.999% filtrat ...
Zhejiang Medical Device Industry Association gara otu ụlọ ọrụ- Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd. (ỌR))
Na October 17, 2018, President Hei Zhenhai, Secretary General Zhang Hanwen, na Secretary Ye Lin gara Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd. (ỌR)). N'oge mkparịta ụka ahụ, Gener ...
Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd. (ỌR)) nyere ntiwapụ nke ọrịa ahụ site na iji ike na-emepụta ihe nkpuchi.
2020 bu afo puru iche. N'afọ gara aga, Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd. (ỌR)) nyeere aka ntiwapụ nke ọrịa site na iji ike na-emepụta ihe nkpuchi. E zigala ọtụtụ narị nde nkpuchi n'ọtụtụ mba Europe. Ka ọ dị ugbu a, Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co ....
Na Mee 2020, Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd. (ỌR)) sonyere na ihe ngosi CMEF Shanghai wee nweta ezigbo nzaghachi.
Na nzuko ahụ, anyị malitere usoro ihe nkpuchi, dịka ọmụmaatụ, ihe nkpuchi ihu ọgwụ, ihe nkpuchi ihu, Mgbazi Ọkara Masks, wdg Ka ọ dị ugbu a, ngwaahịa anyị na ọgwụ anesthesia na akụkụ iku ume dịkwa oke mma. Kpochapu Anya na Anesthes ...